ဧပြီလ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဧပြီလ 2019
နေအိမ် > ဧပြီလ 2019
အဆိုပါ Black ကသစ်တောဂျာမဏီရန်ခရီးသွားခြင်း
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပြီးသားသူတွေကိုသတိထားမိမ, Black ကသစ်တောတောင်ဘက်-အနောက်ဂျာမနီမှာနေတဲ့ကျယ်ပြန့်သစ်တောဒေသဖြစ်ပြီး. ပိုများသောအထူး, က Baden-Wurttemberg ပြည်နယ်တည်ရှိသောကြောင့်တစ်သိသာသောအဘို့ကိုယူထားသောရဲ့. ထို့အပြင်, ဒေသတွင်းပြင်သစ်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတူနယ်စပ်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, so it’s accessible…
ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ လူဇင်ဘတ်မြို့ဒေသခံများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်အတူ coupled ရှေးခေတ်နှင့်ခေတ်သစ်တစ်ခုမှော်ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်, ရိုးရှင်းများနှင့်ဇိမ်ခံ. ဤသူအပေါင်းတို့အမျိုးစုံရ options များနှင့်အတူဆိုဘေးကင်းလုံခြုံဒါဟာင်, သငျသညျပျင်းရင့်ခြင်းမရှိအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိပ်ဆုံးသာအမည်ပေးရန်အဘို့အခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ…
အွန်လိုင်းကစာအုပ်တွေရထားလက်မှတ်တွေ၏ Key ကိုအကျိုးကျေးဇူးများ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအွန်လိုင်းနီးပါးအရာအားလုံးဝယ်ယူရန်ကျွန်တော်တို့ကို enabled ထားပါတယ်. အစားအစာများကိုမိန့်ထံမှ, အဝတ်, ရုပ်ရှင်ပြပွဲများအတွက်လက်မှတ်တွေ booking နှင့်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုအောင်မှအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေ, ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းသောအရာတို့ကိုများများပြုနိုင်သည်. ရထားလက်မှတ်ကိုအွန်လိုင်းဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည့်နောက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်…
ဥရောပမှာတော့ခရီးသွား၏အမြန်ဆုံး Mode ကိုဆိုတာဘာလဲ?
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သငျသညျဥရောပမှာခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုအဘယျစဉျးစားမိသည့်အခါလူတွေထင်ပထမဦးဆုံးအရာပျံသန်းနေသည်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သဘောမတူမယ်လို့! အမှန်တကယ်ပျံပိုမြန်စေခြင်းငှါနေစဉ်, လေဆိပ်သင်အမှန်တကယ်ကယ်တင်ခရီးသွားအချိန်ပမာဏကိုကန့်သတ်ခြင်းထက်နှေးကွေးဘာမှမရှိဘူးင်….
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ နယူးအတွေ့အကြုံများနယ်လှည့်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကများမှာ. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးတိုးရစ်-ဖော်ရွေမျက်မှောက်တစ်ဦးစျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့တစ်ဖယောင်းတိုင်ကိုင်လို့မရပါဘူး, အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုဘယ်လိုအထင်ကြီး. စျေးဝယ်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုဒီအသိရကြ, နှင့်ကံကောင်းထောက်မစွာသူတို့လွှတ်ပေးရန်ရှိရာဥရောပ၌မြို့ကြီးများအများကြီးရှိပါတယ်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဆောင်းရာသီ crackling မီးလောင်မှုတည်ဆောက်ရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်, လုံခြုံစွာတောင်စောင်း hit, snowmen တည်ဆောက်ရန်နှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ကောင်းတဲ့ခွက်ကိုအတူတက် snuggle. ကံမကောင်းသဖြင့်, ကအားလုံးကိုပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများမဟုတ်ဘူး. ဆောင်းရာသီလည်းအများဆုံးသစ္စာပျက်သောလမ်းအခြေအနေအချို့ကိုဖန်တီးပေး. Because it’s not possible…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ နေ့တိုင်းကရထားလမ်းကို အသုံးပြု. ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြည့်ဖို့ဘုံမျက်မှောက်ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်အံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါရထားလမ်းတိုင်းပြည်၏အသက်သွေးကြောအဖြစ်လူသိများကြသည်. မပါဘဲ, သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ပရမ်းပတာဖြစ်လို့ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ပြင်းထန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သင်သည်သင်၏လာမည့်အားလပ်ရက်များအတွက်ဥရောပတွင်ထိပ်တန်းယောဂဆုတ်ခွာဖို့မှလွတ်မြောက်ရန်ရှာနေခဲ့လျှင်, သငျသညျကံရောက်နေ. ကယောဂနှင့်အပန်းဖြေရန်ကြွလာသောအခါအလှဆုံးဥရောပနိုင်ငံတွေထဲကတချို့ဟာကမ်းလှမ်းရန်ပဒေသာများ. Even though India is considered to be the most…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား, ...
10 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ဦး တည်ရာများ